Clean NMDC Campaign – NMDC
By NMDC Editor Uncategorized Comments Off on Clean NMDC Campaign
ကမ္ဘာမြေကြီးကို ကယ်တင်ပေးမယ့် NMDC ရဲ့ သူရဲကောင်းများအားလုံး NMDC နဲ့ ဗိုလ်တထောင်ဘုရားဝန်းကျင်မှာ ရှိနေတဲ့ ပလတ်စတစ်တွေ၊ ရေသန့်ဘူးခွံတွေ၊ အမှိုက်တို အမှိုက်စတွေကို ရှင်းလင်းရင်း ပိုမိုသန့်ရှင်းသာယာတဲ့ Campus Life ကိုရရှိဖို့ အတွက် ကိုယ်တိုင် ပါဝင်လှုပ်ရှားနိုင်မယ့် အချိန်ကျရောက်ပါပြီ။ 😇
ကျောင်းပတ်ဝန်းကျင်တစ်ဝိုက်မှာ လိုအပ်နေတဲ့ Environmental Awareness နဲ့ Conservation အတွက် Clean NMDC လို့ ခေါ်တဲ့ Campus Clean-up Campaign ကို NMDCSU ကနေ ဦးဆောင်ပြီး SU Members များ၊ Miss NMDC Contestants များ၊ ကျောင်းသူကျောင်းသား Volunteer များနဲ့အတူ ပြုလုပ်မှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။🤩
ဒါ့အပြင် ဒီ Campaign ကြီးမှာ ပါဝင်ကြမယ့် Volunteer တိုင်းကို Zero Plastic/Reusable Bamboo Spoon နဲ့ Fork လေးတွေ လက်ဆောင်ပေးသွားမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။🥳
ဒါကြောင့် အားလုံးပဲ စုပေါင်း ပါဝင်လုပ်ဆောင်ကြဖို့ တိုက်တွန်းလိုက်ပါရတယ်… 💓
🗓Campaign က ဘယ်နေ့လဲ???
ညနေ ၃ နာရီ မှ ၅ နာရီ
💬ဘယ်မှာ စု ကြမှာလဲ?
BM ၂ ထပ်ဆောင်ရှေ့မှာပါ
Feb3ရက်နေ့မှာ ပြုလုပ်မယ့် Clean NMDC Campaign မှာတော့ မြေပုံမှာ ပြထားတဲ့ လမ်းကြောင်းအတိုင်း အဖွဲ့တွေခွဲပြီး အမှိုက်ကောက်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် လုံးဝ Environmental Friendly ဖြစ်အောင်လို့ ရာဘာလက်အိတ်၊ စတီးညှပ်၊ Recycled အမှိုက်အိတ်တွေပဲ အသုံးပြုမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ 🧤
Awareness Poster တွေလိုက်ကပ်မယ်၊ အမှိုက်အမျိုးအစားတွေ ခွဲခြားစွန့်ပစ်မယ် စတဲ့ Activities တွေလဲ ပါအုံးမှာမိုလို့ အမှိုက်ကောက်ရင်း ဉာဏ်ပါဆင်လို့ ရမှာပါ။
Campaign တစ်ခုလုံးကို Zero Plastic ဖြစ်အောင် အတတ်နိုင်ဆုံး လုပ်ထားတာမိုလို့ အားလုံးပဲ “ကိုယ်ပိုင် ရေဘူး” လေးတွေလဲ ဆောင်လာဖို့ မမေ့နဲ့နော်။
Clean NMDC Campaign ကို လာရောက်မယ့် (Register ပြီးသား) ပထမဦးဆုံး အယောက် ၁၅၀ ကို Special Gift အနေနဲ့ Eco-friendly ဖြစ်တဲ့ Bamboo Spoon/Fork/Knife Set (သို့မဟုတ်) Steel Chopstick လေးတွေကို လက်ဆောင်ပေးသွားမှာပါ။
This is news video assignment of Journalism final year students.
(English) This is the news video assignment of Journalism final year students.